Phila ixesha elide i-iPod Nano kunye no-Shuffle, u-Apple uyeke ukuzithengisa | Iindaba zeGajethi
Phila ixesha elide i-iPod Nano kunye no-Shuffle, u-Apple uyayeka ukuzithengisa
Okwangoku ukusasaza umculo yinto eqhutywayo kunye nekamva elizayo ngaphakathi kweendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa umculo. I-Apple yaqala ukuqonda ukuba ifomathi yokuthengisa umculo yayiyehla kade ngaphambi kokuba ithenge iBeats Music kwaye emva koko yasungula iApple Music. Zombini i-Apple Music kunye neSpotify kunye nezinye iinkonzo zomculo zokusasaza zisivumela ukuba sikhuphele umculo ukuze siwudlale ngaphandle kwesidingo sonxibelelwano lwe-Intanethi kwaye ngaphandle kokungqamanisa isixhobo sethu neTunes ukuze sibe neengoma esizithandayo. Kule meko intsha I-iPod Nano kunye ne-iPod Shuffel babengenandawo kwaye ekugqibeleni iApple ithathe isigqibo sokuyirhoxisa ngokusisigxina kwintengiso.
Ngokuka-Apple, inkampani iyenza lula imodeli ye-iPod yangoku ngokushiya kuphela i-iPod touch iyathengiswa, intshukumo esengqiqweni kuba inonxibelelwano lwe-Intanethi kwaye isivumela ukuba sikhuphele umculo wethu owuthandayo kuyo nayiphi na inkonzo yomculo esasaza kuyo. Ngokuqinisekileyo, inkampani esekwe eCupertino ihlaziye ukubanakho kwesi sixhobo Ukuqhubeka nokubonelela ngoguqulelo lwe-32 GB ye-229 euro kunye nohlobo lwe-128 GB lwee-euro ezingama-339.
Ngale ndlela, imodeli ye-16 GB iyanyamalala, imodeli ebingasasebenzi kwiminyaka yakutshanje ngenxa yokunqongophala kwendawo, hayi umculo kuphela, kodwa nokuba nakho ukugcina imidlalo ikakhulu. Zombini i-iPod Shuffle kunye ne-iPod Nano bebengakhange bafumane uhlaziyo kangangeminyaka emi-5, kwaye kuyacaca ukuba abafumananga ukhetho olunokubakho. ukubonelela ngezi zixhobo ngokuguquguquka okukhulu ebavumela ukuba banxibelelane kwi-Intanethi kwaye bakhuphele umculo wabo abawuthandayo kwiinkonzo zokusasaza umculo.
Kwakhona I-Apple Watch ikuvumela ukuba ukhuphele umculo wakho owuthandayo kwaye uhambe nawo ngelixa sibaleka Ngaphandle kokuphatha i-iPhone emagxeni abo, ke ikwayintshukumo ejolise kubasebenzisi abanomdla wokuthenga nayiphi na kwezi modeli bayakhuthazwa ngaxeshanye kwaye bafumane iApple Watch, ukuba namhlanje abakayenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Phila ixesha elide i-iPod Nano kunye no-Shuffle, u-Apple uyayeka ukuzithengisa
I-Adobe ibhengeza ukuba iyakushiya inkxaso yeFlash ngo-2020